ချာနိုဘိုင်း နျူးကလီးယား ပေါက်ကွဲမှု
ရေနွေးငွေ့ဆိုသည်မှာ အရည်ဘဝမှ အငွေ့ဘဝသို့ ပြောင်းလဲသွားသော ရေပင်ဖြစ်သည်။ ရေနွေးငွေ့သည် အမှန်စင်စစ် အရောင်မရှိသည့်အတွက် မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ချေ။ ရေနွေးငွေ့ကို မမြင်နိုင်ဟု ဆိုသဖြင့် အချို့က အံ့ဩမိပေမည်။ ရေဆူလျက်ရှိစဉ် ရေနွေးကရားနှုတ်သီးမှ ထွက်နေသ ...
သုတေသန ဆိုသည်မှာ သိုမှီးစုဆောင်း ရရှိထားသော ဗဟုသုတများစွာကို တိုးပွားစေရန်အလို့ငှာ ပြုလုပ်သည့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိ၍ စနစ်ကျသော အလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သုတေသနတွင် ပြဿနာ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်မှု ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာစေရန် သတင်းအချက်အလက ...
သုတေသီ ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံ သုတေသန၊ နည်းပညာ ဆေးပညာသို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာ သုတေသန တို့တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသူ ဖြစ်သည်။ သုတေသီတွင် ပညာရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း industrial နှင့် အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက တွင် လုပ်သူဟူ၍ ရှိသည်။ ဥပမာ အချို့သော ပညာရေး ဌာန ...
မြန်မာ ဈေးကွက်ဖွင့်ဖြိုးမှု သုတေသန သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး သုတေသန အေဂျင်စီဖြစ်သည်။ မြန်မာ ဈေးကွက်ဖွင့်ဖြိုးမှု သုတေသန ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၉၂ မှစ၍ အင်တာဗျူးပေါင်း ၂ သိန်းကျော်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
အရည်ဆူမှတ် ဆိုသည်မှာ အရည်၏ ငွေ့ရည်ဖိအားသည် အရည်ပတ်ဝန်းကျင်နားတွင်ရှိသော ဖိအားနှင့်တူညီသည့် အပူချိန်ဖြစ်သည်။ ပြီးလျင် အရည်သည် ငွေ့ရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ အရည်ဆူမှတ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အနီးမှ ဖိအားပေါ်မူတည်ကာ ပြောင်းလဲသည်။ တစ်ပိုင်းလေဟာနယ်ထဲရှိ အရည်၏ ...
အာကာသယာဉ်မှူး ဆိုသည်မှာ လူစီးနင်း လိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ် ပရိုဂရမ် မှ လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး အာကာသယာဉ် တွင် ကွပ်ကဲ မောင်းနှင်ရန် သို့မဟုတ် အမှုထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုအသုံးအနှုန်းအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အာကာသ ခရီးသွားသူ ...
၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ နွေရာသီတစ်ညနေခင်းတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဗရစ္စတိုမြို့အနီးရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံ၌ နွားနို့သည်မကလေး တစ်ယောက်သည် မိမိ၏ရောဂါကို ပြသလို၍ ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာလေသည်။ ဆရာဝန်က နွားနို့သည်မ၏ ရောဂါမှာ ကျောက်ကြီးရောဂါဖြစ်ကြောင်း ပြောလေသည်။ နွားနို့သည်မကလေးမ ...
လက်ဆေးခြင်းဟူသည် လက်ကို အညစ်အကြေးများ၊ ပိုးမွှားများမှ ကင်းစင်စေရန် ဆေးကြောခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် လိုအပ်သည့်အချိန်အတိုင်း မကြာခဏ ဆေးကြောခြင်းသည် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါ စသည့်ရောဂါများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် မျက်လုံး၊ နှ ...
သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေသည် အနည် အမှုန် ကင်းရသည်။ အရောင် အဆင်း၊ အနံ့ အရသာ ကင်းရသည်။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသော ပိုးများနှင့် ဓာတ်သတ္တုများ ကင်းရမည်။ အနည် အမှုန်များတွင် ရောဂါပိုးများ ခိုကပ်နေသည်။ သံဓာတ်၊ ထုံးဓာတ်ကဲ့သို့ ဓာတ်သတ္တုများလည်း ပါရှိနေသည်။ ...
သန့်ရှင်းသော အစားအစာဆိုသည်မှာ ရေကောင်းရေသန့်ရှိမှ၊ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးရှိမှ၊ ယင်လုံအိမ်သာရှိမှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့် သန့်လေးသန့်ထဲမှ အရေးအကြီးဆုံး အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ရောဂါများ ကာကွယ်နိုင်ရန် အစားအစာသန့်ရှင်းရေးသည် အဓိ ...
သန့်လေးသန့် စီမံချက်ဆိုသည်မှာ မြို့ရွာနှင့် ကျေးလက်ဒေသတို့တွင် အစားအစာသန့်ရှင်းခြင်း၊ ရေသန့်ရှင်းခြင်း၊ လက်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် အိမ်သာသန့်ရှင်းခြင်းတို့အတွက် စီမံကိန်းဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း စီမံချက်တွင် ယူနီဆက်၊ ဗဟိုကျန်း ...
မမျိုးပွားအင်္ဂါ ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားခြင်း ဓလေ့ သည် မမျိုးပွားအင်္ဂါ ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများ အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအလေ့အကျင့်ကို အာဖရိက၊ အာရှနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ ...
Among Us ဒီဂိမ်းဟာအမေရိကန်ဂိမ်းစတူဒီယို InnerSloth မှထုတ်လွှင့်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၅ ရက်မှာထုတ်လွှင့်ပြီးထုတ်လွှင့်ပြီးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာလူမှုဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်ခြင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Impostors ဖြစ်ခြင်းကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရ ...
Disney: Twisted-Wonderland ဂျပန်မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Aniplex နှင့် ဝေါ့လ်ဒစ်စနီဂျပန်မှဖန်တီးသည် ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းများ မြင်ကွင်း၊ နှင့်အယူအဆ ယာနာ ထုံဘို့စို ဖန်တီးသူ Black Butler ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူမှ ဂိမ်းကို Android နှင့် iOS မှာဖြန့်ချိခဲ့သည ...
Clash of Clans သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စူပါဆဲလ် မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့သော မိုဘိုင်းလ် ဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အိုင်အိုအက်စ်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၂ ရက်တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အန်းဒရွိုက်အတွက် ကနေဒါနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံများတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ...
စားသောက်ဆိုင်နိပွန်ကို Android နှင့် iOS operating system မြားအဘို့အ Kairosoft အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ထုတ်ဝေတစ်ဦးခြင်း simulation ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီဂိမ်းသူတို့တစ်တွေအရည်အသွေးမြင့်စားသောက်ဆိုင်ကွင်းဆက်အထိတည်ဆောက်ရမယ့်စားသောက်ဆိုင်မျာ ...
ပိုကီမွန် ဂိုး သည် နီအန်းတစ် ကုမ္ပဏီ မှ ပိုကီမွန် ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ အိုင်ဖုန်းနှင့် အန်းဒရွိုက် မိုဘိုင်းကိရိယာ များအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော အာရုံထပ် လောကစစ် နည်းပညာ ပါဝင်သည့် မိုဘိုင်းဂိမ်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပိုကီမွန် ကုမ္ပဏီ၏ ဖရန်ချိုက်စ် တစ်စိတ ...
စွမ်းအင် သည် ရူပဗေဒ ပညာရပ်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ဖော်ပြသည့် ပမာဏ တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်မှာ အသွင်အမျိုးမျိုးဖြင့် တည်ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ ရွေ့လျားစွမ်းအင်၊ တည်မြဲစွမ်းအင်၊ အပူစွမ်းအင်၊ အသံစွမ်းအင်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်၊ ဓာတုစွမ်းအင် စသည်တို ...
လှုပ်ရှားသွားလာမှုအတွက် စွမ်းအင်ရရှိစေရန် လူတို့သည် အစားအစာကို အမြဲတမ်းစားသောက်၍ ဖြည့်တင်းပေးနေကြရသည်။ အစာ၌ပါရှိသော ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ်ဓာတ်သည် အသက်ရှူရာတွင် အဆုတ်တွင်းသို့ဝင်လာသော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့၏ အကူအညီဖြင့် လောင်ကျွမ်း၍ အပူစွမ်းအင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေ ...
အစားထိုးစွမ်းအင် ဆိုသည်မှာ နေရောင်ခြည်၊ လေ၊ မိုး၊ ဒီရေ၊ ရေလှိုင်းစသည့် အသစ်ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးနေသော ရင်းမြစ်များမှ ရယူထားသည့် စွမ်းအင် ဖြစ်သည်။ အစားထိုး စွမ်းအင်များ ရှာဖွေရခြင်း အတွက် အကြောင်းရင်း အမြောက်အမြား ရှိသည်။ လေထု ညစ်ညမ်းစေသော အရာများနှင ...
ဂြိုဟ်တု ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အပေါ်ရှိ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း လှည့်ပတ်နေသည်။ လူသားတို့ တီထွင်ဖန်တီးထားသော ဂြိုဟ်တုများ ရှိသကဲ့သို့ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဂြိုဟ်တုပေါင်းများစွာလည်း ရှိသည်။ လသည် သဘာဝဂြိုဟ်တု တစ်ခုဖြစ်ပြီး က ...
နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်း သည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်အထက် ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ အထက် ပတ်လမ်းနိမ့်ပေါ် လွှတ်တင် တပ်ဆင်ထားသည့် နိုင်ငံတကာ သုတေသန အဆောက်အအုံ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအား သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင် တပ်ဆင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အဆုံ ...
အာကာသအတွင်းခရီး သွားလာရေးသည် လူတို့၏ အကြီးဆုံးသော စွန့်စားမှုတစ်ရပ် ဖြစ်၍ ထိုသို့ ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ရှိ အာကာသအတွင်းသို့ သွားရောက် စူးစမ်းနိုင်ခြင်းမှာ ကြီးမားသော ဒုံးပျံတို့၏ တွန်ကန်အား၏ ကျေးဇူးကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။ အာကာသအတွင်း ခရီးသွားလာရေးကို လူတို ...
အာကာသလွန်းပျံ သည် ကမ္ဘာပတ်လမ်းအနိမ့်သို့သွားရောက်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမျိုးသား အာကာသနှင့် လေကြောင်း ဦးစီးဌာန က အသုံးပြုသော တစ်စိတ်တပိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ယာဉ်ဖြစ်သည်။ အဓိကတာဝန်များမှာ မရေမတွက်နိုင်သောဂြိုဟ်တုများ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းပ ...
သီအိုရီ ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ရှင်းလင်း ပြောပြနိုင်ရန်အတွက် အိုင်ဒီယာများကို ဆက်စပ် စုစည်းထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရှင်းလင်းပြသရမည့် အရာ နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များပေါ်တွင် မူတည်မနေသော ရှင်းပြချက် တစ်မျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအာဖြင့် ရွှေ ...
ကင်ရှာဆာမြို့ သည် ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး ကွန်ဂိုမြစ်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ယခင်က ငါးဖမ်းရွာကလေး တစ်ရွာသာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ကင်ရှာဆာမြို့သည် မြို့ပြဧရိယာ တစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိပြီး နေထိုင်သူပေ ...
ကန္ဒီမြို့ သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်၏ အဓိက မြို့ ဖြစ်သည်။ ဆင်ဟာလီးစ်ဘာသာစကားဖြင့် မဟာနူဝါရ ဟု အသံထွက်သည်။ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံကို ဘုရင်များ အုပ်စိုးခဲ့သော ရှေးခေတ်ကာလ၏ နောက်ဆုံးမင်းနေပြည်တော်လည်း ဖြစ်သည်။ လက်ဖက်အဓိကစိုက်ပျိုးသော ကန္ဒ ...
ကာရစ်ဘီယံ ; စပိန်: Caribe ; ဒတ်ချ်: Caraïben ; ပြင်သစ်: Caraïbe သို့မဟုတ် Antilles) သည် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ်၊ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တွင်းရှိ ကျွန်းများနှင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ပါဝင်သည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့် မြောက ...
ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံ ၏ တရားဝင် အမည်မှာ ဆီရာလီယွန် သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အနောက်အာဖရိကတွင် ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ဂီနီနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ၊ နှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ တို့က ဝန ...
တနင်္သာရီ တောင်တန်း သည် အရှေ့တောင်အာရှ အင်ဒို-မလေးယန်းတောင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှည် ၁,၇၀၀ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသော တောင်စဉ်တောင်တန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ပါရီမြို့ သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ မြို့၏ဧရိယာသည် ၁၀၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၂၁.၅ သန်း ခန့်ရှိသည်။ စဲမြစ်သည် ပါရီ၏မြို့ဟောင်းဧရိယာကို ပိုင်းဖြတ်ပြီး ၂ ပိုင်း ခွဲထားသည်။ ပါရီသည် ပြင်သစ်၏ စီးပွားရေး၊ နို ...
ဘာစီလိုနာမြို့ သည် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ အန်ဇိုရာတေဂီပြည်နယ်ရှိ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ၁၆၇၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပေါ်တိုလာခရုမြို့၊ လီချီးရီးယားမြို့နှင့် ဂွမ်တာမြို့များကဲ့သို့ပင် ဘာစီလိုနာမြို့သည် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏ အရေးပါသည့် လူနေထူထပ်သော ...
လမ်ဗာရိန်းမြို့ သည် ဂါဘွန်နိုင်ငံ၏ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သကဲ့သို့ ဂါဘွန်နိုင်ငံ၊ မိုယန်-အိုဂွေးပြည်နယ်၏ မြို့တော်လည်း ဖြစ်သည်။ ခုနှစ် လူဦးရေစာရင်းအင်းအရ ၂၅၂၅၇ ရှိသည်။ အီကွေတာ၏တောင်ဘက် ၇၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိသည်။
အရှေ့အာရှ သည် ပထဝီဝင်အရ ပိုင်းခြားခေါ်ဆိုထားသည့် အာရှတိုက်၏ အရှေ့ပိုင်းဒေသကို ဆိုလိုသည်။ အရှေ့အာရှသည် ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းကာ အာရှတိုက်၏ ၂၈% ခန့်ရှိသည်။ ဥရောပတိုက်၏ ဧရိယာထက် ၁၅% ခန့် ပိုမိုကျယ်ဝန်းသည်။ အရှေ့အာရှတွင် လူဦးရေ သန်းတစ်ထ ...
ရှေးလူများသည် အကြောင်းအရာတစ်ခု⁠ခုကို ပျောက်ပျက်မသွားရအောင် မှတ်သားထားလိုလျှင် ကျောက်တိုင်ကျောက်တုံးများတွင် ရေးထိုး၍ ထားတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ ရေးမှတ်ထားခြင်းမျိုးကို ကမ္ပည်းကျောက်စာရေးထိုးသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ကြသ ...
ကျောက်သင်ပုန်း သည် မြန်မာတို့၏ စာပေသင်ကြားရာတွင် အသုံးပြုသည့် မှတ်သားတွက်ချက်ရသော ကျောက်သားနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အရာဖြစ်သည်။ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်၌ စာပေရေးသားရသော အရာကို ကျောက်တံဟု ခေါ်သည်။
ဘူမိဗေဒတွင် ကျောက်ကို အမျိုးခွဲခြားထားပုံမှာ အနည်ကျကျောက် ခေါ် ရေစီးတွင် အနည်အနှစ်ထိုင်၍ ဖြစ်လာသောကျောက်နှင့် မီးသင့်ကျောက်ခေါ် အပူကြောင့်ဖြစ်သောကျောက်၊ အသွင်ပြောင်းကျောက်ခေါ် ဖိအား၊ အပူနှင့် ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်လာသည့်ကျောက်ဟူ၍ သုံးမျိုးဖ ...
ကျောက်သင်ပုန်း၊ ကျောက်တံစသည်တို့ပြုလုပ်ရသောကျောက်ကိုသင်ပုန်းကျောက်ဟုခေါ်သည်။ သင်ပုန်းကျောက်သည်အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ မွဲပြာရောင်၊ အပြာရောင်စသည့်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိတတ်၍တစ်ခါတစ်ရံလချေးရော နှောပါရှိသောအခါအရောင် လက်နေတတ်သည်။ သင်ပုန်းကျောက ...
ရေသစ် မြေသစ် ရှာဖွေခြင်းဟု ဆိုရာ၌ အသစ်ဖြစ်လျက် ရှိသော ရေမြေ ဒေသများကို လိုက်လံရှာဖွေခြင်းဟူ၍ မဆို လိုပေ။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာကြီး၏ မြေ ရေ ဒေသများတွင် လူသူ မရောက်ပေါက်သေးသော ဒေသ၊ ယဉ်ကျေးပြီး လူတို့နှင့် လုံးဝ အဆက်အသွယ်မရှိသေးသောဒေသ အများအပြားပင် ရှိလေ ...
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း၌ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတို့တည်ဆောက်ခဲ့သော အရာများနှင့် သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကို စုစည်း၍ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်များ အဖြစ် စာရင်းအမျိုးမျိုးပြုစုခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့အံဖွယ်ခုနစ်ပါးသည် အစောဆုံးတွေ့ရသောစာရင်းဖြစ်ပြီး လူသားတို့၏ ...
အီရန်နိုင်ငံ ကို ပြည်နယ် ၃၁ ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအား ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရမှ ပြည်နယ် မြို့တော်တွင် ရုံးထိုင်အုပ်ချုပ်သည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဘုရင်ခံချုပ် က ဦးဆောင်ပြီး ယင်းဘုရင်ခံချုပ်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးက အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့ ...
ဗီဆူးဗီးယပ်မီးတောင်သည် ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အထင်ရှားဆုံး သော မီးတောင်တစ်ခု ဖြစ်၏။ ဥရောပတိုက်၏ တစ်လုံးတည်း သော မီးရှင်တောင် ဖြစ်သည်။ အီတလီနိုင်ငံ နေပယ်ပင်လယ် အော်ပေါ်တွင် တည်ရှိ၍ နေပယ်မြို့မှ အရှေ့တောင်ဘက် ၇ မိုင်ခန့် ကွာဝေးလေသည်။ ထိုမီးတောင်၏ အောက်ခြေအ ...
မီရာပီ မီးတောင် သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျဗားအလယ်ပိုင်းနှင့် ယိုဂျာကာတာ အကြား နယ်နမိတ် အနီးတွင် တည်ရှိသည့် မီးတောင်ဖြစ်သည်။ မီရာပီသည် အင်ဒိုနီးရှားရှိ ပေါက်ကွဲမှု အများဆုံးဖြစ်သည့် မီးတောင်ဖြစ်ပြီး ၁၅၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ မကြာခဏ ပေါက်ကွဲလေ့ ရှိသည်။ ယိုဂ ...
ရွှံ့မီးတောင် ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာမြေလွှာအောက်ထဲတွင် ချော်ရည်၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေပူတို့ပေါင်းပြီး မြေမျက်နှာပြင်ပေါ် ထိုးထွက်လာစဉ် မောက်ကြွပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးတောင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မီးတောင်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဆင်တူသည့်အပြင် ရွှံ့ပွက်နေသည်ကို မြင်ရတတ်သည့ ...
ရှင်မိုအဲဒကဲ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ ကျူရှူးကျွန်းရှိ ကာဂိုရှီးမား အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ တွင် ရှိပြီး ကီရီရှီးမား မီးတောင် အစုအဝေး၏ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၇,၃၀၀ နှင့် ၂၅,၀၀၀ ကြားက တောင်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ရှင်မိုအဲဒကဲ၏ ပေါက ...
အက်တနမီးတောင်သည် အီတလီ နိုင်ငံ နေပယ်မြို့အနီးရှိ ဗီဆူးဗီးယပ် မီးတောင်မှ တောင်စူးစူး မိုင် ၂ဝဝ ခန့်ကွာဝေးသော စစ္စလီကျွန်း၏ အရှေ့ဘက်ကမ်း တွင်တည်ရှိ၏။ ဗီဆူးဗီးယပ်ကဲ့သို့ မကြာခဏ ပေါက်ကွဲခြင်း မရှိသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ အကြိမ်ပါင်း ၈ဝ ကျော်မျှ ပေါက်ကွဲခ ...
မြေတိုင်းပညာသည် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ စတင် ဖြစ်ထွန်းခဲ့ဟန် လက္ခဏာရှိသည်။ ထိုအတတ်သည် မြို့ပြဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာပညာတွင် အကျုံးဝင်၍ မြေ၏ အနေအထား ပုံသဏ္ဌာန်များနှင့် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းများကို တိကျစွာ တိုင်းတာပြီးနောက် လွယ်ကူမည့်စကေးဖြင့် ပုံများဆွဲယူသည် ့် အ ...
မြေတိုင်းအမှတ်အသားများ ကို မြေတိုင်းမှတ်များ ၊ မြေတိုင်းအထိမ်းအမှတ်နေရာများ ၊ မြေတိုင်း BM များ ၊ ပထဝီမှတ်များ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို မြေတိုင်းရာတွင် အဓိကကျသော မြေတိုင်းမှတ်များ အဖြစ် မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မှတ်သား ထားရှိသည်။ ၎င်းတို့ ...